Madaxa Gabadhaha K/cagta Soomaaliya oo hal arrin darteed uga carartay dalka – War La Helaa Talo La Helaa
Shayma Maxamed oo ah Madaxa Ciyaartoyda Haweenka ee K/Cagta Soomaaliya ayaa hadalkaasi ku sheegtay Wareysi sy siisay Shabakadda Wararka ee Tuko.com ee laga leeyahay dalka Kenya, waxayna xustay inay hanjabadaasi ka dambeysay, kadib, markii ay Xiriirka K/Cagta Adduunka ee
FIFA u gudbisay Cabasho ka dhan ah Xiriirka K/Cagta ee Soomaaliya.
Madaxa Ciyaartoyda Haweenka ee K/Cagta Somalia, Shayma Maxamed waxay bishii hore u gudbisay FIFA in baaritaan lagu sameeyo dhaqaale loogu talagalay Gabdhaha K/Cagta oo ay FIFA u soo direen Xiriirka K/Cagta Soomaaliya, waa sida ay hadalka u dhigtay.
Waxay FIFA ugu baaqday in tallaabo laga qaado Saraakiisha ku lugta leh lacagaha la is-daba mariyey ee ay FIFA u soo dirtay Horumarinta Mashaariicda Gabdhaha K/Cagta ee Soomaaliya.
Sidoo kale, waxay sheegtay inay Xiriirka K/cagta Soomaaliya wadaan qorshe ay iyada kaga qaadi rabaan Xilkaasi, iyadoo aan dhamaysanin Xilli-hawleedkeeda uu Sharciga u oggol yahay oo dhan muddo 6-sanno ah.
Saraakiisha FIFA oo mar sii horeysay la hadlay Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London u sheegeen inay heleen Cabashadaasi, isla markaana ay Guddi u saari doonaan si ay Madaxda Xiriirka K/Cagta Soomaaliya kala hadlaan arrintaasi, marka ay ku wada kulmaan magaalladda Addis Ababa.
Ma aha markii ugu horreysay ee ay Madaxa Gabdhaha K/Cagta Soomaaliya, Shayma Maxamed cabashadaasi la wadaagto Warbaahinta, waxayna horey Wareysi dheer siisay Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London.